Unogona asingadi kudavira kuti zvomunyama izvi zvingaitika kwauri, asi iwe unofanira kugadzirira mukana kuti iwe, kana mudikanwi, zvinoda kurapwa apo kure nomusha. Kana sezvo nyore sezvo chipping zino rako, spraining neketani yako, achiuya pasi nefivha, kana kurwara nemoyo, kurapwa rwaunoda Varege kufanana nyore sezvo zvingava muUnited States.
Kune zvimwe ruzivo nezve kufamba inishuwarenzi yezvokurapa uye nei uchifanira kufunga nezvekuiwana, ona mutungamiriri raiva pazasi.
• Travel inishuwarenzi vezvokurapa hwakasiyana mureza policies inishuwarenzi kufamba zvikurukuru pakuti haripi nhau kuti mari chokuita cancellations, kunonoka, kana kukanganisa.
• policies idzi yemanyorero anopa nhau kuti chii unowanzoonekwa vaiona anokosha zvokurapa mari. Izvi zvinosanganisira chimbichimbi mukamuri kushanyirwa, kubvisa mabasa, uye kutakura mari chakakonzerwa namaneja kusvika rakakodzera zvokurapa Zvivako.
Unoda embed yedu Blog romukova “The Most Zvinoshamisa Africa In Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)